Beerta casriga ah, kuraasta magaalada iyo jardiinooyinka laga bilaabo MAGAALADA MAGAALADA MAGAALADA
Kursiga Beerta Nasashada waa cunsur lama huraan ah naqshadaha yaryar ee magaalooyinka. Marka laga eego aragtida shaqooyinka yutiilitida, waxaa loo isticmaalaa fadhiisashada, laakiin iyada oo la tixgalinayo qorshaynta meelahan, waxay yihiin alaabta guryaha ee magaalada. Jardiinooyinka, labajibbaarayaasha, jardiinooyinka, jidadka iyo joogsiyada magaalada waxaa ku yaal saqafyo.
Dareenka ballaaran, kuraasta ayaa ah waxyaabaha ugu caansan ee loo adeegsado qaab dhismeedka yaryar ee keliya maahan jardiinooyinka iyo jardiinooyinka. Waxaan sidoo kale ka heli karnaa kuraasta garoomada, horaanta marxaladaha amphitheater, xafladaha iskuulka, kaniisadaha, xabaalaha iyo meelo kale oo badan.
Kuraasta magaalada waa ubax lug ah oo lugaha ka daalay socodka dheer, iyo sidoo kale fursad lagu joojiyo daqiiqad, taas oo noqon karta munaasabad lagu qirto jacaylka. Hadal ahaan gabayo ahaan, kuraasta magaaladu waa sahlan yihiin jardiinooyinka ugu muhiimsan iyo alaabada baabuurta la dhigto, iyada oo taas la'aanteed ay adag tahay in la qiyaaso agagaarka garoonka ciyaarta, gudaha beerta magaaladu, aagga barkadda dambe ama meel kale oo dadweyne.
Waxaan u istcimaalay kursi nasasho annagoo fadhiisan qoraxda beerta ubaxa, anagoo ku raaxeysanayna wadahadal aan la sameynno saaxiibkay barkadda dhexdeeda, aan buugga ku akhrino balliyo ama aan daawado cunugga isagoo faraxsan oo ku raaxeysanaya soo jiidashada garoonka ciyaarta. Hadduusan ahaan lahayn jardiinooyinka lagu nasto, booska magaaladu wuxuu ahaan lahaa mid aad u liita oo aad u yar.
Fadhiyada Beeraha Magaalada
Waxaa jira noocyo badan oo kuraasta magaalada ah. Noocyadooda ayaa lagu kala saari karaa sababtuna tahay halka ay u socdaan, dhismahooda, agabyada loo adeegsado dhismahooda, iyo sidoo kale qaabka iyo nashqadeynta.
Abaabulka ama ujeeddada awgood, waan kala saari karnaa kuraasta wadada, oo inta badan loogu yeero kuraasta magaalada, kuraasta gawaarida iyo jardiinooyinka beerta.
Dhismaha awgood, taas oo ah, qaab-dhismeedka, wuu taagan yahay kuraasta lub kuraasta leh gogosha dhabarka. Fiilooyinku waxay taagan yihiin afar ama in ka badan oo lugaha ah, waxayna sidoo kale si joogto ah ugu xidhan yihiin dhulka dushiisa oo dhan.
Nooca dhismaha iyo qalabka dhammeystiraya, kuraasta jardiinooyinka ayaa loo qaybiyaa kuraasta birta, kuraasta birta - kuraasta ka samaysan baararka birta ah, kuraasta la taaban karo, kuraasta ka sameysan la taaban karo oo la xoojiyay, kuraasta dhagaxa lub kuraasta caagga ah.
Sababtoo ah qaabka iyo qaabeynta, waxaan u kala sooci karnaa daraasiin noocyo kala duwan oo kuraasta jardiinooyinka. Burburinta ugu fudud waxaa ka mid ah kuraasta casriga ah iyo kuraas dhaqameedyada, inta badan lagu dhejiyo qaabka xilligii loo bixiyay ama la waafaqay dhismayaasha ku xeeran iyo waxyaabo kale naqshadaha yaryar ee magaalooyinka.
Jardiinooyinka ugu wanaagsan jardiinooyinka
Maxay tahay in laga fiirsado marka aad dooraneyso kursiga keydka? Shuruudo badan ayaa jira. Hoos waxaan ku soo bandhigaynaa waxyaabaha ugu muhiimsan iyaga.
Kursiga Beerta Jaban? Qiimo
Sida nooc kasta oo iibsasho ama maalgashi, qiimaha sheyga had iyo jeer waa mid ka mid ah shuruudaha xulashada. Xaaladdan oo kale, qiimaha kuraasta jardiinooyinka waxay kuxiran yihiin inta badan qalabka miisaska iyo cabbirkiisa. Dabaqyada jardiinooyinka rakhiisku badanaa waa qaab dhismeedka birta. Kuwa ugu yar ayaa noqon doona kuwa ugu jaban. Kursiga weyn, agab badan ayaa loo isticmaalaa soo saarida, sidaa darteed qiimaha ayaa waliba kordhaya.
Kursiyadaha amniga ah ee magaalada
Iskusoo wada duuboo, kursiga keydka waa inuu aamin u yahay dadka waaweyn iyo carruurta. Qaab dhismeedkiisu waa inuu ahaadaa mid la isku halleyn karo oo waara si badbaadada loo adeegsado qalabkan dariiqa loo soo gaabiyo uusan hoos ugu dhicin isticmaalkiisa.
In kasta oo uusan jirin heer rasmi ah oo Polish ah oo si toos ah u khusayn kara kuraasta baarkinka, waxaa jira shuruudo la mid ah oo ay tahay in lagu dabaqo markii la dejinayo iyo dhisidda kuraasta jardiinooyinka. Heerka PN-EN 1176 ee qalabka ciyaarta waxaa inta badan la adeegsadaa.
Joogteyn ee kuraasta jardiinooyinka
Alaabta ka tagta goobaha dadweynaha ayaa loo geysan karaa kharribaad. Sidaa darteed, kuraasta jardiinadu had iyo jeer waxay leeyihiin nidaam ka-hortaga burburin. Waa kordhinta kursiga keydka ee lagu qoday dhulka, kaas oo ka hortagaya in kursiga keydka la dhaqaajiyo, la xado ama nooc kale oo barakaca ah.
Bench oo leh qashin qashin
Badanaa sheyga aan la kala sooci karin ee ku yaal kuraasta beeruhu waa qashin qashin-qubka. Waxaa lagu dhexgali karaa kursiga keydka asal ahaantiisa. Waxay noqon kartaa shey gooni ah oo ka kooban naqshadaha yaryar, laakiin markaa waa in si taxaddar leh loo doortaa oo muuqaal ahaan la jaanqaadaa nashqaddaha miisaska.
Kuraasta gawaarida waxaa sidoo kale lagu qalabeyn karaa miisas, wareegyo iyo waxyaabo kale oo badan. Waxay bixiyaan meel boorsada, boorsada ama shandada lagu qaato. Waxay kuu oggolaanayaan inaad si deggan u nasato buugga, meel dhig qaar ka mid ah alaabooyinka ama cuno cunno xaalad la mid ah kuwa maqaayadda ka shaqeeya. Xadiiqadaha dhexdooda, kuraasta ayaa mararka qaarkood la socda miisas kuwaas oo ah meel lagu ciyaaro chess, checkers ama ciyaaro kale. Fiilooyinku waxay yeelan karaan iftiin isku dhafan oo ah laambad. Waxay noqon karaan qayb arbor, il-biyood ah, farshaxan-qurxin ama sariir ubax. Maanta mala-awaalku kaliya wuxuu xadidayaa naqshadeeyaha!
Kuraasta birta xarkaha
Ka sameysan kaarboon iyo kaarboon waa bir bir ah. Waxaa loo tixgaliyaa inay tahay sheyga dhismaha ugu cimriga dheer ee loo adeegsado soo saarida kuraasta magaalada. Xargaha kabaha birta ahi waxay qaadan karaan qaabab iyo qaabab badan. Waxay leeyihiin qurxinta quruxda badan iyo xiridda lugta aan caadiga ahayn. Kuraasta noocan ah ee loo qaabeeyey waxay ka shaqeyn doonaan meelkasta, maxaa yeelay waxaad si xor ah u qaabayn kartaa muuqaalkooda. Kursiga birta lagu tuuro ayaa ah alaab guri oo magaalada ah oo sifiican uga shaqeyn doona baarkinka, jardiinada iyo labajibbaarada.
Kuraasta birta xardhan, ka dib sameynta qaab dhismeedka, waa budo, waa mahadsan tahay taas oo jirku u fiican yahay taabashada, oo dushiisa ay jilicsan tahay una adkeysaneyso dillaaca.
Faa'iidooyinka kale ee kuraasta birta xarkaha waa culeyskooda. Kursiyadaha beeruhu noocan oo kale ahi way culus yihiin oo aad bay u xasilloon yihiin xitaa iyada oo aan loo baahnayn in lagu xiro dhulka. Carruurta ku boodbooda dhabarka ma fududaan inay ka gudbaan qaab dhismeedka culus, iyo xitaa wax duminta ayaa diidi kara inay falaan shar.
Kuraasta qoryaha looxyada leh
Fiilooyin ka samaysan alwaax ayaa umuuqday kuwo aad u wanaagsan. Dhismahaan dabiiciga ah wuxuu siinayaa dabeecad iyo karti. Nasiib darrose, sida kiiska qoryaha, waxay u baahan tahay dayactir xilliyeed. Waxay u baahan yihiin rinjiyeyn iyo cusbooneysiin joogto ah. Ka taxaddar kahortagga cimilada aan wanaagsanayn.
Kuraasta qoryaha loo yaqaan 'Wood Park' waa in aan toos loogu dhigin dhulka, ciid ama cawska. Waa inaysan la xiriirin dhulka si joogto ah ama si joogto ah qoyan. Waxay ku habboon yihiin meelaha saqafka leh iyo kuwa leh dusha adag oo daadadsan.
Kursiyadaha xadiiqadaha birta
Universal, kuraasta magaalada casriga ah? Ama waxaa laga yaabaa in keydka beerta gaarka loo leeyahay? Barxada hore? Fiilooyin bir ah ayaa gurmadka u fidiya. Aluminiin bir ah oo kala duwan ayaa loo isticmaalaa meegaaradahooda, inta badan waarta, cimri dheer iyo iftiin. Tusaalaha noocan ah ee qalabka dhismaha waa aluminium.
Kuraasta biraha leh waxay leeyihiin naqshad casri ah. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ay leeyihiin waa miisaankooda hooseeya. Kuraasta noocan oo kale ah ayaa aad ugu habboon in laga guuro meel kale oo loo guuro. Waxay si fiican ugu shaqeyn karaan sida kursi loogu talagalay daawadayaasha wax qabad bannaanka ah ama gabal yar oo alaabta guryaha ah oo booskiisa badali doona, tusaale ahaan. waxay kuxirantahay xilliga.
Kuraasyada la dhigto iyo kuwa dhagaxa la dhigto
Beeraha lagu nasto ama fadhiga magaalada ma aha inay lahaadaan goleyaal, dhabarka dambe iyo lugaha. Waxay noqon kartaa kabad la taaban karo, si xor ah loo sameeyay ama lagu xardhay dhagax. Kuraasta noocan ah waa culus yihiin, uma baahna dayactir mana jiraan wax la dumin karo. Waxay noqon karaan qayb jaranjarada, isha ama salka ubaxa. Waxay si fiican isugu dhexgalaan waxyaabaha kale ee dhismaha.
Xalalka caanka ah waxaa sidoo kale ku jira iskudarka waxyaabo badan. Kursiga keydka leh dhabarka alwaaxa iyo kursiku waxay yeelan karaan lugaha la taaban karo oo weyn. Dhammaanteed waxay kuxirantahay filashooyinka maalgashadaha iyo mala awaalka naqshadeeyaha.
jardiinada beertakuraasta la taaban karokuraasta alwaaxFadhiyada MagaaladaKuraasta BeerahaKursiga Beerta Nasashadakuraasta la taaban karo ee la taaban karokuraasta gawaarida la dhigto oo aan lahayn dhabarka dambekuraasta baarkinka qiimahajardiinada fadhiista liiska qiimahakuraasta alwaaxyadakuraasta Beerta birtakuraasta Beeraha Magaaladakuraasta nasashada casriga ahkuraasta beerta soo saarahakuraasta birta xarkahakuraasta birtaKuraasta bir ee birtakuraasta Beeraha Magaaladakuraasta nasashada casriga ahkuraasta jabankuraasta jardiinooyinka rakhiiska ah